Doorasho Xildhibaan oo ka dhaceyso magaalada Dhuusa mareeb – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaDoorasho Xildhibaan oo ka dhaceyso magaalada Dhuusa mareeb
Doorasho Xildhibaan oo ka dhaceyso magaalada Dhuusa mareeb
Hiiraan Xog, Apr 15, 2018:- Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda maamulka Galmudug ayaa lagu waddaa in maanta lagu qabto doorashadda Kursi ka banaan Golaha Shacabka.
Guddiga doorashooyinka ayaa shaaciyay in maanta la qaban doono kursigii uu ka geeriyooday allaha unaxariiste Bootaan Ciise Caalin.
Waxaa ku tartami doona Musharaxiinta kala ah Maxamed Cilmi Afrax ( mideeye) iyo musharax Cabdulahi Faarax wehliye.
Ammaanka xarunta ay ka dhaceyso doorashadda ayaa si weyn loo adkeeyay, waxaana dhammaan dhuusamareeb ku sugan Ergadii doorashadda ee dooran laheed Xildhibaanada.
Rushka :MAREKANKA IYO XULUFADIISA 100GANTAL AY SOOTUREYN BADANKODANA WEYNU QABANAY.
DAAWO SAWIRO:- Somaliland oo uu ka bilowday ololaha la dagaalanka Nabaad-Guurka Dhirta